Muwaadin soomaali- Iswiidhish ah oo u dhintey falkii Muqdisho - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhintay falkii argagaxisada ee Muqdisho ka dhacay sabtidii. sawir: MOHAMED ABDIWAHAB
Muwaadin soomaali- Iswiidhish ah oo u dhintey falkii Muqdisho
La daabacay måndag 30 oktober 2017 kl 15.25
Oday soomaaliyeed oo dhalashada dalkan Sweden heysta ayaa ka mid noqdey dadkii ku geeriyoodey falkii argagixisanimo ee sabtidii la soo dhaafey ka dhacey magaalada Muqdishu.
Weerarkaas argagixisada ahaa oo lala eegtey hotel Naasahablood-ka labaad oo ku yaala bartamaha magaalada Muqdishu, ayaa waxaa in ey falkaas ka danbeeyeen sheegtey ururka argagixisada ah ee Al-shabaab.
Ninkaan odeyga ah ee falkaas argagixisada ah lagu diley ayaa waxaa geeridiisa xaqiijiyey qoyskiisa iyo waliba dad kale oo ey ka mid tahay Willo Abdulle oo ah gabar soomaaliyeed oo dhalashada dalkan Sweden heysata isla markaasna imminka ku sugan magaalada Mogadishu, waxayna tiri sidan :
- Isla habeenkii qaraxaasi dhaceyba ninkaan magaciisu wuxuu ka mid ahaa dadkii la sheegey in halkaas lagu diley , taasna waxay caddaatey markii maalintii shaley magaalada Muqdishu lagu aasey , ayey tiri Willo Abdulle oo iyagu aqoon gaar ah u laheyd odeygaas la diley.
Galabnimadii sabtida ayey aheyd markii qarax lala eegtey hotel Nasahablood 2 ee Mogadishu oo dad badani ey markaas ku sugnaayeen. Falkaas argagixiso ayaa waxaa ku geeriyoodey dad gaaraya 29 qof, waxaana mas’uuliyadda falkaas iney ka danbeeyeen sheegtey ururka argagixisada ah ee Al-shabaab.
Dadka halkaas ku dhintey ayaa waxaa ka mid ahaa odeygaan soomaali/ Iswiidhishka ah oo isagu daganaa magaalada Borlänge, qoyskiisa ayaa iyaguna caddeeyey in odeygu uu qaraxaas ku dhintey.
Wasaaradda arrimaha dibadda dalkaan Sweden ayaan ilaa hadda waxaan soo gaarin warka la xiriira dilka magalada Muqdishu lagu diley ninkaas Iswiidhishka ah, balse wasaaradda ayaa sheegtey in ey dadweynaha oo dhan hadda ka hor uga digtey in eysan sinaba ugu safrin magaalada Muqdishu.
Ururka argagixisada ah ee Al-shabaab ayaa falkaan maalintii sabtida dadka lagu laayey qirtey in ey iyagu ka danbeeyeen, kaas oo dhacey laba usbuuc ka dib markii dad kor u dhaafaya 350 qof ey ku dhinteen falkii ugu dhimashada badnaa ee ey argagixisadu ka geysato dalka Soomaaliya.
Willo Abdulle oo iyadu muddooyinkii danbe ku nooleyd dalka Soomaaliya ayaa sheegtey in dhacdooyinkii dhiigu ku daatey ee maalmihii ugu danbeeyey magaalada Muqdishu ka dhacey , ey raad xoog leh ku yeesheen dadweynaha ku nool magaalada Muqdishu, waxaana yaraadey dadkii wadooyinka magaaladaas marayey, dadkuna aad iyo aad u feejigan yihiin, sidoo kalana waxaa xiran dukaamo aad u farabadan, ayey tiri Willo Abdulle.